ajụjụ Islands Canary.
5 ọnwa 1 izu gara aga #1239 by josmor
5 ọnwa 1 izu gara aga #1240 by Dariussssss
Ndewo ma nabatara Rikoooo.
Nke a bụ ebe na-adịghị mma iji bipụ nsogbu ndị ị nwere na sim gị. Biko tinye nsogbu a n'okpuru isiokwu ya, ma ọ bụ FSX ma ọ bụ P3D.
Anyị ga-eme ike anyị niile iji nyere gị aka.